Keebaa wanaagsan xiddigaha Neymar Jr iyo Eden Hazard? waxaa ka jawaabaya Marcelo – Gool FM
(Madrid) 20 Luulyo 2019. Daafaca garabka bidix reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Marcelo ayaa amaanay xiddiga ay isku wadanka kasoo wada jeedaan ee u ciyaara Paris St Germain Neymar Jr.
Marcelo ayaa u arka in Neymar Jr uu ka fiican yahay xiddiga dhawaan galka ah kooxda Real Madrid ee Eden Hazard, isagoo xaqiijiyay in laacibka naadiga PSG uu leeyahay tayo ka dhigeysa inuu yahay mid ka mid ah 5-ta ciyaaryahan ee ugu fiican adduunka.
Neymar Jr ayaa haatan ku gudi jira waqtigiisii ugu xumaa ee xirfadiisa kubadda cagta, maadaama uu xumaaday xiriirka kala dhexeeyay maamulka kooxda Paris St Germain, kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu doonayo dib ugu laabashada kooxdiisii hore ee Barcelona.
Hadaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Marcelo waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Eden Hazard waa ciyaaryahan aad u fiican sida Neymar, balse Neymar wuxuu leeyahay tayo ka dhigeysa inuu yahay mid ka mid ah 5-ta ciyaaryahan ee ugu fiican adduunka”.
“Neymar waa ciyaaryahan soo jiidasho leh, mana leysla bar-bardhigi karo, aniga ahaan Neymar ayaa ah kan fiican”.